Translate Welsh to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Welsh to Myanmar (Burmese), Welsh to Myanmar (Burmese) translations, Welsh to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Helo sut wyt ti မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
A oes unrhyw un? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Rwyf wrth eich bodd yn fawr iawn ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Faint y mae'r hamburger hwn yn ei gostio? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Allwch chi fy ffonio tacsi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Mae'n ddrwg gennyf ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Esgusodwch fi တဆိတ်လောက်
Mae gennyf ddiddordeb ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Cafodd fy hedfan ei oedi အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Rydw i yma am fusnes ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Helo fy enw i yw မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Mae'n ddrwg gen i, ond rwy'n briod ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Hoffwn ofyn ichi ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Allwch chi fynd â mi i'r maes awyr? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Beth yw'r amser ar hyn o bryd, os gwelwch yn dda? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ble mae'r orsaf heddlu agosaf? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
A allaf fenthyg eich charger ffôn os gwelwch yn dda? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Allwch chi fy helpu? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Archebwch ddiod, os gwelwch yn dda? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Faint mae'n ei gostio? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Rwy'n alergedd i glwten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Ffoniwch feddyg ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Oes meddyg? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
A allaf gael galwad? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Galwch fi i'ch pennaeth, os gwelwch yn dda. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Mae'r lle hwn yn braf iawn ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ewch â mi i'r gwesty os gwelwch yn dda ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Beth yw fy rhif ystafell? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?